တော်လှန်ရေးနေ့ နှင့် ဖွန်ကြောင်ပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တော်လှန်ရေးနေ့ နှင့် ဖွန်ကြောင်ပွဲ
တော်လှန်ရေးနေ့ နှင့် ဖွန်ကြောင်ပွဲ
Posted by phone_kyaw on Mar 27, 2012 in Copy/Paste | 11 comments
ကျွန်မ တို့ ကတော့ ချောတဲ့ ရှေ့ကအလံကိုင် စစ်ဗိုလ်တွေ ကိုတော့ ငမ်းပါတယ်။
ယူနီဖောင်း နဲ့ ဘာနဲ့ ဆိုတော့ နဂိုရုပ်မရှိသူတောင် ခန့်ညားသလို ဖြစ်သွားတာကိုး။
စာပေးဖို့ အထိတော့ မစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ပန်းကုံး မရှိရှာတဲ့ စစ်သား လေးတွေ ကို ဘဲ ပန်းကုံး နဲ့ သကြားလုံးတွေ ပေးပါတယ်။
အဲဒီ စစ်သားလေးတွေ တကဲ့ ကို ဝမ်းသာသွားတာ ကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
ခါတိုင်းလို ခပ်စောင်းစောင်းပဲနေမှာ တွေးပြီး ဝင်ဖတ်ကြည့်ပါတယ်…။
ကိုဘုန်းကျော် ရဲ့ဒီပို့စ်လေးက တော့ အတည့်လေးပါလား…။
ခင်ဗျားကတော့ Mandalaygazette ဆိုဒ်ရဲ့ မင်းသားတစ်ပါး ဖြစ်နေပါပြီ…။
ွှဲအဲဒီဦးဖုန်းကျော်ကြီးပြောလိုက်ရင် တုတ်ထိုးအိုးပေါက်ကြီးဗျ၊ ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမြို့ကိုလာခွင့်ရတဲ့အခါလာခဲ့ပါလား ။ဦးလေးကြီးငန်းစရာ တရုတ်မတွေပေါတယ်၊စကတ်တိုတွေနဲ့ချောတယ်။ မြန်မာဆန်ဆန် ၊ဆံပင်ရှည်ရှည်နက်နက်တွေတော့မရှိသလောက်ရှားတယ်။မြို့၏အလယ်တွင်တရုတ်တွေနေပြီး အစွန်အဖျားတွင်မြန်မာများနေသောမန္တလေးမြို့မှကြိုဆိုပါတယ်။
“ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတော့ ယူနီဖောင်းကိုကော့လန်အောင်နေ၀တ်၊ ပြီးရင် ဘိုးကေကိုပြောင်နေအောင်ဖီး၊ စင်ပေါ်မှာ ခန့် ခန့် ကြီး ပွားနေတာကတော့ အင်မတန်ရုပ်ဆိုးပါတယ်။”
ဟေ့ကောင်ဘုန်းကျော်- အရမ်းမပြောနဲ့၊ ရေးပေးတဲ့စာ မလွဲအောင် မနဲ ပြူးပြဲဖတ်နေရတဲ့ ငါ့ဒုက္ခရော မင်းသိလို့လား။
ကိုဘုန်းကျော်ရေ .. ရှင်ပြောတော့မှပဲ..ငယ်ဘ၀ကမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ … ဖွန်မမတွေအကြောင်း သတိပြန်ရသွားတော့တယ် … ။
ကျွန်မတို့အမျိုးထဲ စစ်တပ်အသိုင်းဝိုင်းကလူတွေရှိတော့ … တော်လှန်ရေးနေ့တိုင်း …. ပန်းကုံးသွားစွပ်ဖြစ်တယ် … ဆယ်အောက်အရွယ်ဆိုတော့ ….စပ်စုချင်လို့ လူကြီးတွေသွားတာ လိုက်သွားတာပေါ့လေ … ။ တော်လှန်ရေးနေ့မတိုင်ခင်ကတည်းက ရီဟာဆယ်တွေ လုပ်ကြရတယ် … ။ အစဉ်နေ့မှာလည်း … ပန်းတွေကို ..ညဘက်ကတည်းက ကြိုတင်ပြီး …သွား အပ်ထားရတယ် …. ။ လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ပါတယ် …. ။ စစ်တပ်အသိုင်းဝိုင်းထဲကလူတွေရယ် .. အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းအချို့ရယ်နဲ့ ….. ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်း နဲ့ စစ်တပ်… ပတ်သတ်ရာ ပတ်သတ်ကြောင်းတွေလောက်ပဲ …. လာစွပ်ကြတာပါ …. ။ တစ်ချို့ကတော့လည်း … ကိုယ့်တပ်ထဲကလူ ပါလျှင် … တပ်ရင်းမှုးကတော်နဲ့ …. ဗိုလ်ကတော်များက … လာအားပေးတဲ့အနေနဲ့ .. စွပ်ကြတယ်ပေါ့ … ။
နှစ်တိုင်းမရိုးနိုင်အောင်တွေ့ရတာတော့ …. သင်္ကြန်ယိမ်းကတော့မလို အမူယာ၊ အပြင်ဆင်နဲ့ ဖွန်မမများက … စာရွက်လိတ်လေးတွေကို သေးသေးလေးကျစ်ပြီး …စစ်သားလေးတွေရဲ့ …လည်ပင်းပေါက်ကနေ အကျီ င်္ထဲကို ပစ်ပစ်ထည့်ကြပါတယ် … ။ ကလေးတုန်းကတော့..ဘာတွေထည့်မှန်းမသိဘူးပေါ့ … မုန့်ဖိုးထည့်ပေးတာလား လို့တောင် ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်ပြီး …ထင်မိသေးတယ် … ။ နောက်တော့ … လမ်းကြောင်း တစ်ခုနဲ့တစ်ခု စပ်ကြားက ကျနေတဲ့ စာရွက်အကျစ်ခေါက်လေးကို ဖြေကြည့်တော့မှ နာမည်နဲ့ ဆက်သွယ်ရမယ့် လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖြစ်နေတော့တယ် … ။
အဲ့ဒီအချိန်က ကလေးစိတ်ပေမယ့် … တွေ့သမျှစစ်သားကို လိပ်စာပေးပြီး ..လင်ရှာပုံတော်ထွက်တဲ့ မိန်းမတွေကိုတော့ မုန်းမိတယ် … ။
(တဆက်တည်း အတင်းပြောလိုက်ဦးမယ် … နှလုံးရောခါအခံရှိတဲ့လူတို့ .. မူးတတ် ၊ မော်တတ်တဲ့လူတွေ ရှိလျှင် ..မသွားတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ … လူနံ့ နဲ့ ချွေးနံ့ နဲ့ … အီလည်လည် … အန်ထွက်ချင်စရာ အနံ့ရယ် … ၊ သူတို့ကိုယ်က အပူရှိန်ရယ်က … အသက်ရှုတောင် ကြပ်စေလို့ပါပဲ .. ) … ။
ဟိုးငယ်ငယ်တုန်း အန်တီ ဆရာမတွေ ပန်းကုံးသွားစွပ်တာ လိုက်သွားရတယ် အကျိုးဆက်အနေနဲ့စစ်သီချင်းတွေ တောင်အလွတ်၇တယ် အန်တီတွေလဲ ဆိတ်ဗိုလ်တွေနဲ့ ၇တယ် ညဘက်ဆို မီးပန်းတွေ ဖောက်တာကြည့် ရတယ်.. ခုတော့ ရေတောင် စစ်မသောက်တော့ဘူး
ိဗိုလ်တွေများ ချောတယ်ထင်လို့လား ချောတာတော့မမက်ဘူး စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့သူဘဲမက်တယ်